Bentley Systems kwuputara nnweta SPIDA - Geofumadas
Nnweta nke SPIDA Software
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), ụlọ ọrụ akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, taa kwupụtara nnweta nke SPIDA Software, ndị mmepe nke sọftụwia pụrụ iche maka imepụta, nyocha na njikwa nke sistemu osisi bara uru. Ntọala na 2007 na Columbus, Ohio, SPIDA na-enye ngosiputa usoro, nkwekọ na njikwa ngwanrọ ngwanrọ maka ụlọ ọrụ eletriki na ụlọ ọrụ nkwukọrịta na ndị ọrụ injinia ha na US na Canada. Mwekota nke SPIDA n'ime ngwanrọ injinia OpenUtilities Bentley na ọrụ igwe ojii dijitalụ nke netwọkụ ga-enyere aka idozi ihe ịma aka nke ịgbanwee ike na ume ọhụrụ, gụnyere ụgwọ ụgbọ eletriki, iji ihe eji arụ ọrụ iji kwado mgbasawanye 5G nke netwọkụ na brọdbandị. isi ike nke okporo ike iji nọgide na-enwe ntụkwasị obi na nkwụsi ike.
Twmụ ejima ejikọtara ọnụ nwere ike ịnye ọrụ na ihe nnọchi anya nke ikuku na nke nkesa, na-ejikọ grids smart na nhazi usoro na 3D na 4D nke anụ ahụ ka ọ na-arụ ọrụ. Bentley's OpenUtilities dijitalụ netwọk ejima na-enyere ndị na-arụ ọrụ ike na ndị nrụpụta aka ịtụle azụmaahịa na ohere nke netwọkụ, bụ nke gụnyere ọdịnala ọdịnala, nke nwere ume na nchekwa nchekwa. Ka ha na-enye ọrụ iji gboo mkpa. Twmụ ejima dijital na-akwalite njikwa ahụike nke akụ site na ịtụkọta IT, OT, na ET (usoro injinia na nnwale) iji mepụta ihe data akụrụngwa IoT yana nyocha amụma iji melite nchekwa, arụmọrụ na ntụkwasị obi. Na mgbakwunye na nke SPIDA, iru nke netwọk nke dijitalụ ejima ahụ nwere ike ịgbatị ugbu a na ụlọ ọrụ na netwọkụ ịba uru, na-enye “ngwụcha ikpeazụ” nke ngwangwa gburugburu ebe obibi nke ihe dị mkpa maka ike na nkwukọrịta.
Ndị isi ụlọ ọrụ ịba uru eletrik, gụnyere Ameren, EPCOR, Nashville Electric Service (NES), na Southern California Edison (SCE), na-arụpụta arụmọrụ na nkwụsi ike nke sistemụ igwe ha site na iji sọftụwia SPIDA. Ihe ngwọta nke uru SPIDA gụnyere SPIDAcalc iji weghara, gosipụta ma bulie nnyefe na nkesa nkesa maka ibu ọrụ. SPIDAsilk iji nyochaa eriri ekwe na obimgbalielu imewe nke anụ ahụ na gburugburu ebe obibi Njirimara maka ezi eduzi nwụnye na cable erughị ala; na SPIDAstudio, igwe ojii nke dabeere na igwe ojii nke na-esochi ma na-achịkwa ọnọdụ akụ na ọnọdụ anụ ahụ nke usoro ikuku.
Dika mgbasawanye ngwangwa nke isi ihe ndi ozo di ike na-aga n'ihu ma enwere onu ogugu maka ojiji nke ugbo ala eletriki, akuku netwok anyi na-abawanye karia, na ntinye nke 5G-kwadoro brọdband, ogwe osisi bara uru Ndị na-ege ntị na Network enweghị ọnụ ahịa maka akụrụngwa na-aga n'ihu, ”Kwuru Alan Kiraly, onye isi osote onye isi oche, netwọkụ na arụmọrụ bara uru, Bentley Systems.
Inweta SPIDA Software, ọ bụ ezie na ọ baghị uru na nsonaazụ ego Bentley, ga-agbakwunye ndị ọrụ ibe 26 na North America. Ndị ndụmọdụ Mile 7 Mile nyere ndị njikwa na ndị na - ekenye SPIDA ndụmọdụ na azụmahịa ahụ.
Ọhụụ anyị na SPIDA na-abụkarị iji nye azịza zuru oke na imeghe iji kwado ma melite ahụike na iguzosi ike n'ezi ihe nke ike ndị ọrụ na akụrụngwa nkwukọrịta. N'ime ndị otu Bentley, anyị na-ele anya imezi ngwanrọ Grid Digital Twin, nke na-eme ka ụlọ ọrụ ngalaba ọrụ anyị dịkwuo mma ma tinye SPIDA nhazi usoro. Ndị ọrụ SPIDA ugbu a na ndị ọdịniihu nwere ike iji obi ike na-atụ anya idozi ejima dijitalụ nke netwọk ahụ ka ha na-akwalite, gbanwee, gbasaa ma jikwaa sistemụ ikuku ha. Brett Willitt, Onye isi nke SPIDA Software
N'ihi nnweta ọhụrụ a nke Bentley Systems iji melite arụmọrụ na nkwụsi ike nke netwọkụ ya, ọ dabara na ọrụ igwe ojii nke (DT) ejima dijitalụ -Open Utilities- nke nnukwu teknụzụ a nyere. Njikọ a nke echiche na ịhazi usoro na-enye ohere ịza nsogbu ndị ọhụrụ metụtara ume dị ọcha / na-agbanwe agbanwe, yana ịkwalite nyocha nke akụrụngwa akụrụngwa metụtara ọrụ ọha na eze.
Bentley na-adabere na teknụzụ maka mmepe oghere na-aga n'ihu. Ihe dị mkpa iji nwee ọganihu n'ụdị a bụ ịnweta ezigbo akụrụngwa maka itinye ma dozie njikọta nke ọrụ 5G yana iwusi netwọkụ eletrik na ike ha ogologo oge. Ebumnuche amamihe nke Bentley gosipụtara na ịrị elu ahịa ya kamgbe afọ gara aga. Nke na-egosi na ọ ga-aga n'ihu na-eto ma na-agbanwe mgbe niile, na-agbanwe ihe ngwọta ya na eziokwu nke mgbanwe mgbanwe ụlọ ọrụ nke 4 a.
Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị ọrụ ọhụrụ anyị sitere na SPIDA ruo Bentley Systems na OpenUtilities, anyị na-atụkwa anya na anyị ga-agbakọta ma jikọtara SPIDA sọftụwia, nke amaralarị na ndị injinia na-ekesa ike na-enweghị atụ na ọrụ ha dị mkpa iji melite arụmọrụ. . »Ian Kiraly, onye isi osote onye isi oche, netwọkụ na arụmọrụ bara uru, Bentley Systems.
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ akụrụngwa akụrụngwa. Anyị na-enye sọftụwia ọhụụ iji kwalite akụrụngwa ụwa, na-akwado ma akụnụba ụwa na gburugburu ebe obibi. Ihe ngwanrọ anyị na-eduga na ngwanrọ na-eji ndị ọkachamara na òtù dị iche iche maka imewe, iwu na arụmọrụ nke okporo ụzọ na akwa mmiri, okporo ụzọ na njem, mmiri na mmiri mmiri, ọrụ ọha na eze na ụlọ ọrụ, ụlọ na ogige. Na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Onyinye anyị gụnyere ngwa dabere na MicroStation maka ịme ngosipụta na nkwekọ, ProjectWise maka nnyefe ọrụ, AssetWise maka netwọkụ na arụmọrụ bara uru, yana ikpo okwu iTwin maka ụmụ ejima dijitalụ akụrụngwa. Sistemụ Bentley na-arụ ọrụ karịrị ndị ọrụ 4000 ma na-ewepụta ego kwa afọ nke ihe karịrị $ 800 nde na mba 172. www.bentley.com
Previous Post«Previous UMUAKA UAV EXPO AMERICAAS
Next Post INFRAWEEK 2021 - ndenye aha na-emegheNext »